Ruushka oo cunaqabateyn cusub ugu jawaabay reer Galbeed – Radio Muqdisho
Ruushka oo cunaqabateyn cusub ugu jawaabay reer Galbeed
Dowladda Ruushka ayaa qaaday tallaabo ay uga jawaabayso cunaqabateynta ay ku soo rogeen dowladaha reer Galbeedka, kadib markii duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine.
Ruushka ayaa sheegay in 48-dal oo ay ku sifeysay ‘dowlado galay falal saaxiibtinimada ka baxsan’ ay uu ka mamnuucay qalabka isgaarsiinta, caafimaadka, gaadiidka, beeraha iyo korontada ee Ruushku uu u dhoofiyo.
Xayiraadaan uu soo rogay Ruushku waxay soca doontaa ilaa dhammaadka sanadkaan 2022-ka sida lagu shaaciyey bayaanka Moscow.
Wasaaradda dhaqaalaha ee Ruushka ayaa sheegtay inay qaadi doonto tallaabooyin dheeraad ah oo ay kamid tahay inay maraakiibta shisheeye ka mamnuucdo dekadaha dalkaas.
Dowladaha Galbeedka ayaa Ruushka saaray cunaqabateyn xoogeedu yahay joojinta iibsiga shidaalka iyo gaaska dalkaas, iyo xayiraadda hantida maalqabeennada wadankaas ee loo arko inay xiriir dhow la leeyihiin Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
Ciidamo ka tirsan Gor Gor iyo Haramcad oo maanta la geeyey Matabaan